Kedu ka ndị okike ọhụụ ọhụụ dị egwu si echepụta?
Okechukwu Ikwerre November 1, 2020 March 23, 2021
Abstract Artists and Art: Nwa na White, Nkọwa, Geometric, na Oge A
Dị ka onye mbido chọrọ ịmalite ebe na nkà ị kwesịrị ịmalite ebe. Enwere m olileanya na ịchọta ihe odide m bụ ihe na-atọ ụtọ. KISS ma mepụta, ị nwere ike ịbụ onye na-ese ihe nkiri na-atọ ụtọ.
Nkwuwa ihu na-aga n'ihu: site n'ịrapagidesi ike na akụkọ m, ị ga - enweta ezigbo echiche banyere ubi nke ihe osise na - enweghị atụ n'echeghị m gbasara ndị omenkà ndị ọzọ.
I nwere ọtụtụ echiche banyere ndị na-ese ihe nkiri. Anyị bụ ngwaahịa ngwaahịa na oge anyị. Taa na oge dijitalụ, abụ m onye na-ese ihe n'oge a. Mepụta site na oge gara aga ma na-eweta ihe pụrụ iche.
Ka oge na-aga, ihe osise ọhụụ ọgbara ọhụrụ tupu agha ahụ ghọrọ nkwupụta nkịtị mgbe WW II gasịrị. Ka ọ na-erule afọ ndị 1980, echiche nke ịgwakọta ihe atụ na abstractions ghọrọ ihe na-adọrọ mmasị nye ọtụtụ ndị na-ese ihe.
Echiche m adabaghị na edemede ndị a. Iji ngwa dijitalụ, m na-emezu Post art art. A na m agwakọta ụdị abụọ ma ọ bụ atọ na nke ọ bụla m mepụtara. Oge agwakọtara ya bụ oge m na - eche maka ọtụtụ ọrụ aka m.
Taa enwere mweghachi nke ndị na-ese ihe nkiri bụ ndị dị ezigbo iche n'ihi ngwaọrụ dijitalụ.
Ka ị na-ele ihe osise nke aka m ghọtara na ị na-arụ ọrụ pụrụ iche.
M na-enye m nkịtị nka na ndị ọzọ dị ka akwụkwọ ịma ọkwa na kwaaji Mbipụta.
Nkwupụta nye ndị omenkà na-ese okwu
Tupu m bido, achọrọ m inye ọtụtụ ndị bu ụzọ m. Site na JMW Turner ruo Picasso ruo Pollock ruo Franz Kline, na ọtụtụ ndị na-ese ihe nkiri.
Ana m asọpụrụ na ọrụ m niile nye ndị buru m ụzọ. Ihe m mere bụ ihe pụrụ iche, ma bụrụkwa nke dị n’otu mbụ. Achọrọ m ọtụtụ akụkọ ihe mere eme iji zọọ ụzọ m.
Isiokwu a bụ ihe atụ nke echiche m na nka. Gụ nke a, enwere ike ịme ka ị kwenye na m bụ onye na-ese ihe nkiri. Ihe omuma abughi ihe ozo na aru m.
Abstract Art Black na White
Site na onyonyo oji na nke oji, esi m na ndọrọ ndọrọ ọchịchị wezuga isi mmalite nke Postmodernism m, ojiji nke ndi isi ochie.
Ọrụ mbụ a bụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Aga m akpachapụ anya ka m ghara ịza ajụjụ. I nwere ike iche gbasara ọrụ a.
Amamihe nke American 4 nke David Bridburg dere
Post Pop Art, American Intellectual 4 na-abịa ogidi ruo 9 x 4 ụkwụ. Obere ihe edere ederede mara mma ma sie ike. Ihe osise dị na ibe a bụ foto Edward S. Curtis.
Ojiji m ji usoro Post Post na-apụta ìhè ozugbo. Ihe m meworo bu iji onyogho gara aga mebe onyonyo ohuru n’iji ngwa oru dijital.
"Ochie okpu", ị na-ekwu. Ọfọn n'ụzọ ụfọdụ ị ziri ezi. Ihe dị iche bụ ndị nabatara oge mbụ na-eme nka dị ka ihe ọchị. Nke a bụ ezigbo nka. Mona Lisa enweghị sket ya n’elu ebe ọ na-ese anwụrụ.
My artform dabara Post Modern theory, ma oge agwụla. Ozizi a hiwere n'ezie ọtụtụ iri afọ gara aga. Ya mere, ihe na-enye? Ngwaọrụ dijitalụ na-enye. Echiche m n'echiche na-enye. Ihe gara aga na-enye. Ugbu a na-enye. Nke a bụ ọrụ ọhụụ.
Obere ihe emere na Postmodernism na ihe ngosi di ka atumatu atumatu. N'ezie dị ka ụdị, ọ bụ naanị nkà ihe ọmụma. N’oge na-adịbeghị anya, veranda ndị dị na New York anwalewo mgbalị iregharị akwụkwọ. Echiche m na-agbakwunye bụ naanị m na-emepụta.
Nkà ihe ọmụma nke Postmodernism dị mfe. Emeela ihe niile tupu oge a, site na iji oge gara aga, anyị mepụtara ihe ọhụụ. Okwu abuo abuo ndi meghariri nke a bu enweghi komputa na obi ike nke ndi oru mbu. Nkesa art bụ ikpeazụ taboo na artworld.
Abụọ ndị a bụ ụmụnne nwanyị ma ọ bụ ụmụnne. Bka nke “Ihe Akpụrụ akpụ nke Devid” nke Michelangelo na-ewere ọnọdụ dị n'etiti.
Abụọ ndị a dị na nke m Nchịkọta oge. Otu na-esote nke na-esote. Egwuregwu ahụ bụ nkịtị. Echiche na-etolite na nchịkọta a. Isiokwu a na-aghọ ihe ka anyị na-aga ọrụ wee rụọ ọrụ. Mgbe ahụ ihe ahụ na - aghọ akara ngosi pere mpe.
Oge a 11 Michelangelo nke David Bridburg dere
N'ime ha abụọ, amalitere m iji onyogho a n'okpuru. Nweta ihe nrite m nke nka ma mepụta onyonyo a dị ka egosiri.
Oge a 12 Michelangelo nke David Bridburg dere
Gịnị ka Michelangelo nọ na-eche? Ọfọn, ọ bụghị onye na-ese ihe nkiri. O doro anya na ọ ga-enwe ike ịhụ ọrụ ọrụ abụọ a. Omenala ya adịla anya azụghị ya maka oge a.
Nye Michelangelo, ọrụ abụọ a agaghị abụ ọrụ ihe atụ ma ọlị.
Na-esote na-enwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ruo isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị taa.
Nwa oji a na oji banyere ịbụ ndi pere mpe nọ n’oké osimiri ọcha. Enweela m aka dị ka onye na-ese ihe na oji iji kwado akụkụ.
Na-adịbeghị anya32 by DavidBridburg
Ibe a na-ajụ ajụjụ, "gịnị ka ndị mmadụ na-eche"? Anaghị m agbaziri ego n’aka ndị ọzọ na-ese ihe. Ana m ewere oke ehi ahụ na mpi wee kwuo ihe m bịara ikwu.
Nkọwa Art Nkọwa
Ime nka dị ka o kwere mee, nka na - esite n’echiche abstraction. Ọ bụrụ na ị nwere blanket ajị anụ n’ezinụlọ gị, chee maka iwere ya ka ọ bụ sentimita atọ n’obosara. Mgbe ahụ gbawaa sentimita atọ ahụ n’elu akwaji ụkwụ atọ. Achọpụtaghị ihe a na-ahụ anya dị ka square site na blanket ajị anụ.
Enwere oru nka na nke ahu. Ugbu a debe nkọwapụta ọ bụla, wee mepee ụwa nke okike.
Enwere ike ịrụ ọrụ ọhụụ ọzọ. Enwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla ọhụụ. Mmeghe Nkwupụta Okwu si n’ebe ahụ mepụtara.
Probably ga-enwerịrị ike ịnụ ụtọ ihe oyiyi di na nwunye na-esote. Ha bụ Neo Cubism. Nke a bụ ebe m na-ewere Cubism Mondrian. Na-eme ka ha ịbụ Post Modern, Neo Cubism, na nka nkịtị. Post Oge a bụ okwu nche anwụ m.
Ihe odide nke Geometric
Mondrian's Cubism gbasara nhazi geometric. Ọrụ abụọ a na-asọpụrụ Mondrian.
Geometric a na-ahụ anya bụ ụzọ nke ya na abstraction. Nke a dị mkpa n'ihi na m gbanwere n'ụdị ndị ọzọ nke abstraction. Karịsịa nka ọhụụ na-arụ ọrụ na-ewepụ akụkụ ma ọ bụ ụdị okike.
Mmekọrịta gbasara ohere dị iche iche dị iche iche. Ha abụọ nwere akụkụ atọ. Enweghị ụkpụrụ agba dị na Post Modern art. Kama na-arụ ọrụ na-eme m onwe m agba chepụtara. Otu nkwekọ na nchepụta agba m na-arụ ọrụ na ụda dabara na mkpokọta agba na mpempe akwụkwọ nka.
24 na-adịbeghị anya site n'aka David Bridburg
Ntinye aka na ọrụ ndị a bụ egwuregwu. Ana m ejikarị nkà m eme ihe ọ bụla.
25 na-adịbeghị anya site n'aka David Bridburg
Adịbeghị anya 27 bụ nnwale. Gbaji ụgbọ elu na ịkpụpụta mepụtara ihe na-adịghị eme eme.
N'ịhụ na m ga-ekpori ndụ, akpọrọ m nke a ihe osise onwe onye.
27 na-adịbeghị anya site n'aka David Bridburg
A na-ahazi 33 na nso nso a, mana usoro okike dị oke oke. Ọzọ agba dị nnọọ jikọtara nke ọma maka ụda. Aestical dị n'otu.
33 na-adịbeghị anya site n'aka David Bridburg
Ọzọkwa ịghọta ihe m nwere, M mepụtara 34 na-adịbeghị anya site na iji 33 dị ka prototype m. Nke a abughizi oru aka. Ihe okike ka bu geometric.
34 na-adịbeghị anya site n'aka David Bridburg
Banye n'ụdị ọdịdị geometric nke echiche m mepụtara Obe nke akwa agba. Ejila otu agba agba ugboro abụọ. Nnwale a wepụrụ n'ụzọ mara mma, ọ bụrụ na m kwuo ya n'onwe m.
35 na-adịbeghị anya site n'aka David Bridburg
Enwere mpempe akwụkwọ ole na ole ọzọ na mkpokọta m. Achọrọ m imechi ngalaba a nke isiokwu nwere ihe na-atọ gị ụtọ.
Chee echiche banyere Jazz ụfọdụ, ikekwe Charlie Parker ma ọ bụ Miles Davis. Chee echiche maka otu olu eji emekọrịta ihe.
Ihe gbapụrụ ọtụtụ ndị omenka, ụda bụ ihe kpatara ya. Iberibe ojoo nke syncopation bụ agba dị iche.
Oroma nke David Bridburg
Nke ahụ bụ echiche m. Enwere m naanị onyinye ole na ole iji nye gị otu ndị omenkà ndị ọzọ chere na ha ga-esi kwado gị.
X na nso nso a bu okwu nrube isi nke okwu x. Eji m okwu egwu Music Not x mee nke a iji mepụta echiche pụtara mgbe m nọ na nchịkọta Post Contemporary Collection. N’ime ọtụtụ mkpokọta m ndị ọzọ, aha Rustic x onye omenkà, Ngwakọta x aha onye omenkà, yana Inv (erse) Blend x aha onye omenkà et ..etc…. eji.
Edere Post Pop Art na American Intellectual Collection m, American Intellectual x bụ onye na-etinye aha ya. Mmekọrịta nke mmeghari nka nka buru ibu kwughariri site na mmeghari ihe omuma nke oge a. Ọzọ nche anwụ genre bụ Post Modern.
Nchịkọta nka na ebe nrụọrụ weebụ m, Bridburg.com, haziri nke ọma. M guzobere-ewu rụọ ka art n'ime a collection. Na-ebugharị ihe owuwu iji mepụtawanye nka n'ime nchịkọta. Mgbe ahụ, m na-echepụta ihe owuwu ọhụrụ maka isiokwu nchịkọta ọhụrụ.
Ndị ọzọ na-ese ihe nkiri na-adịghị adị na-eji aha ebe edebe aha “untitled x”. Dị ka ndị na-ese ihe na 1960s na karịa ime nke a, ha furu efu na shuffle.
Mgbe e mesịrị na-ebufe nkịtị art online site na utu aha “untitled x” na-nnọọ nnukwu nsogbu maka kọmputa. Kasị njọ karịa maka ndị na-ese ihe, ọha na eze enweghị ike ịdabere na ịchọta isiokwu ndị malitere dị ka "ahaghị x". Ọtụtụ n’ime ndị omenkà a jiri utu aha ndị ọzọ pere mpe.
Ọrụ furu oge.
Ọ bụ ezie na anọghị m n'ọgbọ ahụ nke onye na-ese ihe na enweghị ike ịnụ nhụjuanya ha, ọnọdụ ahụ agaghị ekwe omume maka veranda ha.
Enwere ike ịgwa gị okwu n'oge a, abughi m onye na-ese ihe. Okwu m anaghị akwụ ụgwọ maka ndị nche ọnụ ụzọ ámá. Ana m agwa gị okwu. My mgbaru ọsọ bụ gị ntụrụndụ.
Ọ bụrụ na amata m ma emechaa, ọ ga-adị mma.
Abstract Art Oge a
Ogologo nka nke oge a bu ụzọ tupu WW II. Ọ bụ ihe ịtụnanya ịtụgharị uche na theorọ mmụọ n'oge ahụ, Freud ka Marx ruo Einstein. Maka ebumnuche anyị ka anyị were nke a malite Picasso.
Pablo Picasso ghọtara ihe niile banyere oge ya. Ọ bụ onye na-ese ihe nkiri. Ọ bụghị onye omenkà AbEx.
N'ịsọpụrụ Picasso, a ga m egosi gị ihe onyonyo ya nke kpaliri mmụọ m ruo ọtụtụ iri afọ.
Nwanyị site n'aka Pablo Picasso
Ihe onyonyo a na egosiputa dika odi nma ma obughi maka m ere.
Nke na-esote nke a bụ obere ọhụụ ọhụụ ugbu a.
20 na-adịbeghị anya site n'aka David Bridburg
Ọ bụrụ na agba abụọ na-esote dị ka nke edoghị gị anya n'ihi na echere m na iko Dixie ji agba agba a. Ikekwe agba Dixie dị ntakịrị karịa.
Ihe oyiyi a na-abịa nbipụta nha ruru aka itoolu dị ka mgbidi. Ihe onyonyo ọgụgụ isi nke America a na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ihe ọhụrụ.
Amamihe nke American 18 nke David Bridburg dere
Oge ị ga-ebili na egwu ka ahụ gị gbaa egwu.
Onye ọ bụla Lee dome, laghachi na bass
The jam na-ebi ndụ na mmetụta na anaghị m igbu oge
Na mic na dope rhyme
Bido n’olu dara ụda, wụlie elu, wụlie elu gaa n’afọ ofufo
Anọ m ebe a iji jikọta
Egwu na egwu iji mee ka ị maa jijiji
Mee ohere, bia ma gbaa egwu
Ysmụ okorobịa jidere nwa agbọghọ, echekwala, mee ka ọ na-agbagharị
Ọ bụ ụwa gị ma abụ m naanị osa
Gbalịa 'nweta mkpụrụ iji megharịa gị
N'ụlọ ịgba egwu, yabụ yo kedu nke na-eme
Aka nọ n'ikuku, bịanụ sị "ee"
Onye obula no ebe a, mmadu nile no ebe ahu
Ìgwè mmadụ ahụ dị ndụ ma ana m achụso uzo a
Ndị ọzọ nọ n'ụlọ ahụ Gaa (hapụ uche gị)
Groove (tinye m n'ahịrị) Bịa ka ọsụsọ, nwa
Ka egwu weghara
Mee ka ụda ahụ mee ka ị gbanwee
Isi Iyi: Chika OkpalaNdi na-ede egwu: Frederick Williams / Robert Clivilles Mbipụta Ltd., Royalty Network
Ihe osise oge ochie site n'aka David Bridburg
Oge Picasso malitere site na nkpuchi agbụrụ nke Africa. Gba egwu n'okirikiri ọkụ dị omimi n'ime anyị niile.
E nwere ike kpughee onye na-agba egwu ya. Ihe dị n'okpuru n'agbanyeghị etu ụwa si bụrụ otu mmadụ.
Hapụ onye ahụ na-eme ka onye ahụ nwee omenala. Onye ahụ apụla ugbu a n'okwu anyanwụ.
Ritual nke David Bridburg
Jiri onyonyo dị mfe, achọrọ m ijikọ gị ihe. Whale bụ minimalism. Echiche bụ nke anyị. Ọhụụ kwesịrị ịbụ ahịhịa nke okike, mana nke ahụ adịla anya. Mmiri dị elu na ojii nke oké osimiri gbanwere na-acha uhie uhie.
Naanị echiche anyị dị mfe.
Whale nke David Bridburg dere
Echere m na echiche m metụtara gị. Ọ ga-amasị m iche na anyị anọghị naanị anyị.
Enwere m fudged? Enwere m ike ikwu na nka ndị a bụ nke m?
M zuru ezu?
Ọtụtụ ndị na-ese ihe na-aga n'ihu m bụ mkpali m. Gwa gị okwu gbasara m gbasara m.
Enwere oge ole na ole n'ime akwụkwọ m ebe m na-arịọ maka nkwado gị. Ruo ugbu a abụghị m onye na-ese ihe agụụ na-agụ. Ugbu a bụ oge iji maa aka ịbụ onye omenkà na-agba mgba. LOL
Pịa na ihe oyiyi m ọ bụla ịchọrọ iji hụ ihu ahịa ihe oyiyi na weebụsaịtị m (anaghị emetụta ihe mkpuchi mkpuchi na elu).
Ajụjụ:: nwere ike ikwu ọtụtụ ihe? This nwere ike ịchọta isiokwu a na-atọ ụtọ.